Global Trade & Auction - problemclean.com
မိတ်ကပ် နှင့် ခရင်မ်
Nail Art ပစ္စည်းများ
ဖုနး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း
အခွန် မပါ၀င်သေး သောစျေးနုန်း
products များကို သင့် စျေး၀ယ်လှည်း ထဲတွင် ပေါင်းထည့်ပြီးသွားပါပြီ
0 items များ သင့် လှည်းထဲမှာ ရှိပါတယ်။ သင့် လှည်းထဲမှာ 1 item ရှိပါတယ်။
product များ စုစု​​​​​ပေါင်း (tax excl.)
စုစုပေါင်း ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်း (tax excl.) စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားနိုင်ရန်
စုစုပေါင်း (tax excl.)
စျေးဆက်လက်၀ယ်ယူရန် ငွေရှင်းဖို့ ဆက်သွားရန်
ထုတ်ကုန်နှင့်ဖြန့်ဝေသူများ ရှာဖွေခြင်း ထုတ်ကုန်နှင့်ဖြန့်ဝေသူများ
Online မှ Order စီမံနိုင်ခြင်း Order စီမံနိုင်ခြင်း
ပြည့်စုံသော Order ထိန်းသိမ်းမှု Order ထိန်းသိမ်းမှု
H & M အမျိုးအစား
H & M အမျိုးသားဝတ်
H & M အမျိုးသမီးဝတ်
ကုန်သွယ်လိုသောပစ္စည်း အနည်းအများကို ကျွမ်းကျင်စွာရော င်းချနိုင်လာခြင်း။
အွန်လိုင်းလမ်းကြောင်း ပေါ်မှစျေးကွက်အတွင်းရှိ ဖောက်သည်များစွာကို ရယူနိုင်ခြင်း။
 စျေးကွက်ချဲ ့ထွင်ရန် လွယ်ကူခြင်း။
ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှု နှင့် လေလံ
တောတွင်း လေ့လာရေးခရီးနဲ ့တောင်တက်ခရီးတွေသွားပြီဆိုရင် တကိုယ်ရည်သုံး အိပ်ယာလိပ်လေးကလည်းမရှိမဖြစ်ပါရမဲ့ပစ္စည်းလေးပါ...။
နားတွင် လှပစွာနားကပ်တစ်ခုကဲ့သို့တပ်ဆင်နိုင်ပြီ Phone Handset နှစ်လုံး တစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်ထားနိုင်သေား Bluetooth Handfree mini လေးပဲဖြစ်ပါတယ်..။
mobile phone ရှိသူတိုင်း မရှိမဖြစ်ဆောင် ထားသင့်တဲ့...အဝေး ရိုက်..ဖုန်းcamera lens လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
 ခရီးတိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရက်ရှည်ခရီးပဲဖြစ်ဖြစ် သွားတဲ့အခါ အလွယ်တကူဆောင်သွားလို ့ရတဲ့ အိတ်ဆောင်မှန်ဘီလူးလေးပါ။
Secret Men Gift Box
လက်ဆောင်ပေးရတာမျိုးလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားမလဲ။ ဘယ်ပစ္စည်းကသင့်တော်မလဲ။ ကိုယ်ကကောင်းမယ်ထင်ပြီးဝယ်လိုက်တဲ့အခါ သူမှကြိုက်ပါ့မလား။
Bushnell Monoculars ( 16×52 )
Magnification - 16 ×Objective Lens - 52 mm
ခရီးတိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရက်ရှည်ခရီးပဲဖြစ်ဖြစ် သွားတဲ့အခါ အလွယ်တကူဆောင်သွားလို ့ရတဲ့ အိတ်ဆောင်မှန်ပြောင်းလေးပါ...
Blue Rose Soap Box
“နှင်းဆီ” ဟာ တော်ဝင်ပန်းတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ မြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့ ပန်းလည်းဖြစ်တယ်။
မွှေးရနံ ့သင်းတဲ့နှင်းဆီပန်းလေးတွေနဲ ့ရေချိုးတာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေပါတယ်....
Lazy Magic Glasses
 Lazy Magic Glasses လေးဟာ လူကြီး၊လူငယ် အသက်အရွယ်မရွေး စိတ်ကြိုက်အရောင်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အသုံးပြုရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာပါ။
Smart Bluetooth Headset Call Bracelet
$22.59 $25.10 -10%
 Digital Talk Band လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။  လတ်ပတ်အပြင် bluetooth ear phone အဖြစ်လည်းလတ်ပတ်မှခွာ၌နားမှာတပ်ဆင်ပြီး hand free အဖြစ် လဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...
Bushnell Binoculars ( 20×50 )
Magnification x Obj Lens:20x 50mmClose Focus: ft/m45/13.7
Flower Heart Soap Box ( Big Box )
$9.10 $14.00 -35%
3Dရုပ်ရှင်ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းကိုဒီ VR Box လေးထဲမှာထည့်ပြီးကြည့်ရှုရုံနဲ့ကိုယ်ကြည့်နေကျသာမန်ရုပ်ရှင်လေးတွေကိုရုပ်ရှင်ရုံမှာ3D ကား ကြည့်ရသလိုရုပ်လုံးကြွအသက်ဝင်စေမှာပါ။
 Memory Card သို့SD Card ဖြင့်ထည့်သွင်းအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုကားများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါသည်...
Rose isaSign of Love
All Product 101 to 200
 Huawei အမြတၱံဆိပၼြ ထုတႅဳပ္သၫ့္ Y6 II ေမာၵယႅၹဳႏ္းသၫ္ 2G, 3G, 4G ၾကႏ္ရကၼ္ားၾတင္ ၾ ကၫႅင္်ပတ္သားျစာ ဆၾက္သယ္ႏိုင္ရႏ္်ပဳလုပၴားေသာ ဖုႏ္းတစႅဳံး်ဖစၸါသၫ္။ 5.5 လကၼ အ႐ၾယ္႐ြိမ္က္ႏြာ်ပငၠိဳ အသုံး်ပဳထားေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းခံၿပီး ေတာကၸၾကၫႅင္ေသာ ်မျငၠင္းမ္ားကို ေၾတ႕်မင္ႏိုငၼြာ်ဖစၸါသၫ္။
 Display : 5.7 လက်မ  Processor : Quad-core 1.2 GHz
 2.4 Megapixel 1080 Water-Proof HDCVI စနစ်ဖြင့် IR-Bullet ကင်မရာစသည့် အင်္ဂါရပ်များပါ၀င်ခြင်း။ 1/2.8 "2.4Megapixel CMOS 25 / 30 fps @ 1080P, 25/30/50/60fps @ 720P , IP 67
 graphic T (logo short-sleeved) F လို့အမည်ပေးထားတဲ့ T-shirt ဖြစ်သည်။ အကျီင်္အရှေ့ဘက်ကို စတစ်ကာ အသားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
 Airy design ရှပ်အင်္ကျီ ဖြစ်ပါတယ်။ စကပ် (သို့) ဘောင်းဘီရှည်ဖြင့် ၀တ်ဖို့ အကြံပြု ချင်ပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ideapad Y700 (Gaming)
 မျက်နှာပြင် အရွယ် အစားက15.6 " ဖြစ်ပါတယ် ။ 6th Gen; Intel Core i7-6700HQ Processorudk ကိုအသုံးပြု ထားသောကြောင့် မိမိတို့ အတွက် မျက်နှာပြင်မှာ 15.6″ FHD TN(SLIM) ထည့်သွင်း ပေးထားပါတယ် ။ 16 GB DDR4 ပါရှိပါတယ်
Aspire l ES1-431 (Celeron) 2GB RAM
 မျက်နှာပြင်အကျယ် 14" ပါရှိပြီး ကြည့်လင်ပြတ်သားတဲ့ Full HD LED LCD Resolution ရုပ်ထွက်တွေကိုကြည့်ရှူခံစားအသုံးပြုနိုင်မယ့်Laptop တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
 စတင်ရောင်ချသည့်နေ ့---စက်တင်ဘာ 2016 Form factor ---Touchscreen Dimensions (မီလီမီတာ)---138.30 x 67.10 x 7.10
DH - HAC - HUM3100B
 1/2.9"1 Megapixel CMOS 25/[email protected] 1280x720 (resolution)စနစ်ဖြင့် ရုပ်သံကို ကြည်လင်စေခြင်း။ အမြင့်နှုန်း ၊ အမြန်နှုန်း ၊ ရှည်လျှားသော အကွာအဝေးဖြင့် အချိန်မှန်ထုတ်လွင့်ပေးနိုင်ခြင်း။
ကင်မရာ    12 MPအလေးခြိနျ  6,63OZ
Aspire l Switch Alpha- 12 (i5)
 6th Gen; Intel Core i5-6200U Processor (3MB L3 Cache,2.3GHz)ကို အသုံးပြု ထားသောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်သွပ်လက်စွာအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ မျက်နှာပြင်အကျယ်ကို တော့ 12″ HD Acer CineCrystalTM LED ကို သုံးပြု ထားပါတယ်။
100% ၀ါဂွမ်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၀ါဂွမ်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် နူးညံ့သော အထိအတွေ့နဲ့ ၀တ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
 အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။ အဝတ်မှအရောင်ပြယ်ခြင်းစွန်းခြင်းဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အနံ႔ပါဝင်သော အဖြူရောင်သီးသန့်အတွက်detergent အသုံးပြုပါက အရောင်မှိန်စေပါသည်။
 အမျိုးသားဝတ် ဦးထုတ်ပါ hoddie ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။အစင်းလိုင်းပုံစံပုံ ဖော်ထားပါတယ်။  ပါ၀င်ပစ္စည်း Polyester70% • ၀ါဂွမ်း 30%  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
A5 (2016) မှာ Fingerprint Sensor ပါ၀င်လာခြင်း၊ နောက်ပြီး CPU Octacore (1.6 GHz) နှင့်Memory (RAM 2GB) အသုံးပြုထားခြင်း၊Body ပိုင်းမှာဆိုရင် ရှေ့ရောနောက်ပါ Corning Gorrila Glass4အသုံးပြုထားခြင်း။
Aspire V 15 Touch Laptop - V3-572P-326T
 Window 8.1ကိုထည့် သွင်း အသုံးပြု ထားပါတယ် ။ Intel® Core™ i3-5005U processor Dual-core2GHzကိုအသုံးပြု ထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကို 15.6" HD (1366 x 768)ကို အသုုံးပြု ထားပါတယ်။
 အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။ အဝတ်မှအရောင်ပြယ်ခြင်းစွန်းခြင်းဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
 ခြားနားသော အရာင် အဆင်းနှင့် အတူ ရေပုံး အိတ်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။  အဖြူရောင် အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။  လက်ကိုင်နှင့် ပုခုံးသိုင်းကြိုးပါရှိပြီး ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ ကြိုးပါရှိပါတယ်။  အထဲတွင်အိတ်ပါရှိပါတယ်။  အမြင့် x အကျယ် x အနက်: 30 x 30 x 14 စင်တီမီတာ. / 11.8 x 11.8 x 5.5″
Asus A556U (i7)
SPECIFICATION 6th Generation Intel Core i7-6500U (2.5GHz) 4GB DDR3,1TB HDD Nvidia Geforce GT-940M(2GB) 15.6" Full HD Display DVDRW,HDMI,Cardreader Bluetooth,Lan,Wlan
Aspire V 15 Laptop - V3-572-75D2
 Windows 8.1 ကို ထၫ့္ၾသင္း အသံုး်ပဳ ထားပါတယ္။
 ပစ္စည်း Rayon 82% ပိတ် 18%  အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။ အဝတ်မှအရောင်ပြယ်ခြင်းစွန်းခြင်းဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
 အမျိုးသမီးတွေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဂျင်းစကပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခါး၏ အပေါ် ပိုင်းတွင်ဝတ်ဆင်ရတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။100% ၀ါဂွမ်း ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ဘယ်ဘက်တွင် အဖွင့်အပိတ်ဇစ်ပါရှိသည်နှင့်အတူခါးတွင် ခါးပတ်ကြိုးကွင်းနဲ့ လက်ဝဲ လက်ယာ တွင် အိတ်ကပ်၂ခု ပါရှိပါသည်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
 သတ်မှတ်ချက် - အိတ်ကပ်: ရင်ဘတ်× 1 (လက်ဝဲ) ×2(လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ) တို့ရှေ့မှာနှင့်2×နောက်ကျော (လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ)တို့ ပါရှိပါသည် ။ ကြမ်းတမ်းစွာ ပွတ်တိုက်၍ လျှော်ခြင်းကို ရှောင် ကြဉ်ပါ။
 Intel N2840 (2.16G) ကိုအသုံးပြု ထားပါတယ်။ 4G RAM ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်တယ်။ 500GB Memory ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Intel Integrated Graphics လည်းပါ၀င်ပါတယ်။ DVDRWလည်းပါရီပါတယ်။
 Display : 5.0 လက်မ  Processor : Quad-core 1.3 GHz
 Display : 5.3 လက်မ  Processor : Quad-core 1.3 GHz
 အမြင့်နှုန်း ၊ အမြန်နှုန်း ၊ ရှည်လျားသောအကွာအဝေး နှင့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။  (ICR),AWB,AGC,BLC,2D-DNR စနစ်ဖြင့် နေ ့နှင့် ည မှတ်တမ်းယူနိုင်ခြင်း။ 6မီလီမီတာ အတိမှန်ဘီလူးဖြင့် 3.6 မီလီမီတာ ၊ 12 မီလီမီတာ ၊16 မီလီမီတာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ်နိုင်ခြင်း။
 ဒူခေါင်းအောက် ထိ ရှည်တဲ့T shirt ပုံ စံ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀တ်ရတာ အဆင်ပြေစေမဲ့ အကျီ် ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပါးလွှာ တဲ့ အကျီင်္ဒီဇိုင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်း 100% ၀ါဂွမ်းဖြင့်ပြု လုပ်ထားပါတယ်။ ပါ၀င်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ အရှေ့ ဘက်တွင် အိတ် ၂ခုပါရှိပါတယ်။ ဘယ်နဲညာဘက်တွင် အခွဲ ပါရှိပါတယ်။ Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
HP Pavilion X2 10-n117TU
 နာမၫ္ႀကီးတံဆိပၲစၡဳ်ဖစ္သည့္ HP မြ ထုတႅဳပ္ေသာ X2 10-n117TU သၫ္ window 10 entry ်ဖစ္သည့္ (2MB Cache, 1.4GHz) ကိုအသံုး်ပဳထားေသာေၾကာင့္ အၾလႏႅ္င္်မႏၼည့္ လုပ္ေဆာငၡ္ကၼ္ားကို ရရြိႏိုငၼြာ်ဖစၸါသၫ္
MSI CX62 6QD (i3)
• DDR4L 4GB 2133MHz (2 Slots, Max:16GB)ကို ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားပါတယ်။• 500GB SATA , ပါ၇ှိပြီး DVD Super Multi (9.5mm) လည်းပါ၀င်ပါတယ် ။•မျက်နှာပြင် မှာ 15.6″ HD (1366×768) Anti-glare ဖြစ်ပါတယ်။
 Display : 5.7 လက်မ  Processor : Quad-Core 2.1+1.5GHz
 အမြင့်နှုန်း ၊ အမြန်နှုန်း ၊ ရှည်လျားသောအကွာအဝေး နှင့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ (ICR),AWB,AGC,BLC စနစ်ဖြင့် နေ ့နှင့် ည မှတ်တမ်းယူနိုင်ခြင်း။6မီလီမီတာ အတိမှန်ဘီလူးဖြင်2.8 မီလီမီတာ၊3.6 မီလီမီတာ ၊8 မီလီမီတာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ်နိုင်ခြင်း။
 HDCVI ကင်မရာဖြင့် (၈) လိုင်းအသံဖမ်းနိုင်ခြင်း။ H.264 Dual-streamP ရှိပြီး 1080P မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်း။ အခမဲ့ Application အဖြစ် IDMSS Light / GDMSS ကို ရနိုင်ခြင်း။
 SKU XI624EL13CKWWNAFAMZ  ေမာၵယႅ္ Redmi 3s
Display : 5.3″ QHD In-cell (2560×1440, 554 ppi)ကင်မရာ : Rear 16MP Standard ကင်မရာ အသုံးပြု ထားခြင်း။အနောက်ဘက် 16MP Wide ကင်မရာပါ၀င်ခြင်း။အရှေ ့ဘက် 8MP Standard ကင်မရာ ပါ၀င်ခြင်း။  Memory : 3GB RAM/ 32GB ROM
Android 5.0 Lollipop, 8 မျက်နှာပြင် Samsung က Quad Core Processor, 1.2 GHz အမြန်နှုန်း 16 GB ကို Flash ကိုမှတ်ဉာဏ်, 1.5 GB ကို RAM (128GB ) microSD card slot (3g, LTE ) WIFI support display : 1024 x 768 XGA
Samsung Galaxy A5 (2016 Edition)
မျက်နှာပြင်: 5.2 လက်မOcta-Core 1.6 GHz အမြန်နှုန်းStorage: 16 GB ကို,2GB RAM, အထိ 128 GB ကို၏ Micro SD
GU Brand ကထုတ်တဲ့ကျောပိုးအိပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းအိတ်နှင့်အတူ, ပုခုံး 32 ×အနံ (အောက်ခြေ) 23 စင်တီမီတာ, (အပိုင်) မြင့်တက်: 10 စင်တီမီတာ, ပခုံးအရှည်: ~ 95 စင်
MSI GS70 2QE (i7)
 MSI ၏ လက်ရှိမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ MSI GS70 2QE (i7) Gaming notebook Laptop တစ်လုံးဖြစ်ခြင်း။ Memory DDR3L 8GB x21600MHz (Max:32GB)တပ်ဆင်ထားခြင်း
 ရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု-ရောင်စုံသားရေပုံးအိတ်။  အိတ်အတွင်းပိုင်းတွင် အိတ်ကပ်အကြီး ၂ခုပါရှိပါတယ်။  သံလိုက်စွဲစေ။ လက်ကိုင်ကြိုးနှင့် ပုခုံးတွင်ကြိုးသိုင်းလွယ်ရန် ကြိုးရှည် တစ်ခု ပါရှိပါတယ်။  အမြင့်က x အကျယ် x အနက် :. 28 x 28 x 22 စင်တီမီတာ / x 11.0 x 11.0 ×8.6″
 Display - ၅ လက်မ  Processor - Octa-Core 1.2 GHz
DENIM SHIRT (KIDS)
 DENIM SHIRT လို့ ခေါ်ပြီး Jean သားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရှပ်အကျင်္ီကော်လာလက်ရှည်ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။  Instock ကုန်သွားတဲ့ပစ္စည်းများကတော့ (၂) ပတ် လောက်ထပ် စောင့်ပေးရပါမယ်။
Predator 17 X Gaming Laptop - GX-791-73FH
 Acer ၏ နောက်ဆုံးလက်ရှိမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ - GX-791-73FHနဲ ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
 T-shirt ပုံစံ ၀တ်ဆင်နိုင်တဲ့ စကပ်အတို ဖြစ်ပါတယ်။  လည်ပင်းမှာ v ပုံ စံ ဖြစ်ပါတယ်။  ပါ၀င်ပစ္စည်း ဘယ်ဘက်တွင်အကျီင်္ အိတ်ကပ်တစ် ခုပါရှိပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
MSI CX62 6QD (i7)
 မျက်နှာပြင်အကျယ် 15.6" ပါရှိခြင်း။ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ Full HD Resolution(1366×768) ရုပ်ထွက်တွေကို ကြည့်ရှူခံစားအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
Dell Inspiron 3558 (i3)
 မျက်နှာပြင်အကျယ် ၁၅.၆ လက်မ ပါရှိပြီး ကြည့်လင်ပြတ်သားတဲ့ Full HD LED Resolution ရုပ်ထွက်တွေကိုကြည့်ရှူခံစား အသုံးပြုနိုင်မယ့်Laptop တလုံးဖြစ်ခြင်း။
အမျိုးသားဝတ်အကျီ်လက်ရှည် အနွေးထည်ဖြစ်ပါတယ်။အတွင်း တွင်ဝါဂွင်း60% ထည့်သွင်းကား ချုတ်ထားသောကြောင့် ဆောင်းတွင်း တွင် ၀တ်ဆင်ပါက နွေးထွေးမှုကို အပြည့်အဝ ပေးစွမ်းနိုင်မှာ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Honor 4x Che 1-CL10
 မျက်နှာပြင်: ၅.၅ လက်မ Processor : Quad-Core 1.25GHz သိုလှောင်မှု : Internal 8GB, 2GB RAM
 HDCVI စနစ်ဖြင့် ဗီဒီယို အဝင်ကြိုးကို ပ့ံပိုးမှုပေးနိုင်ခြင်း။ H.264 Dual-strream ဖြင့် ဗီဒီယို ချုံ ့၊ ချဲ့ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။ HCVR4224AN-S2 သည် ရုပ်သံလိုင်းအားလုံးကို 720p ဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း။
 Display : 5.5 လက်မ Processor : Octa-core 1.6 GHz Storage : Internal 16GB, 3GB RAM Micro SD up to 128GB
 RAM 32 MB ။ ကြိုးမဲ့အမျိိုးမစား ရဒေီယိုကွိမျနှုနျး 2.4 GHz ။ Brand Name Ubiquiti Networks ။
 size ေဒါင္လိုက္ 28 cm × အလ်ားလိုက္ (ေအာက္ေျခ) 20cm , Machi: 17cm, ပခုံးအရွည္: ~ 128cm
 အရှေ့ဘက်တွင်ဇစ်ပါရှိတဲ့ ခေါင်းစွတ် ဦးထုပ် ပါ အနွေးထည်ဘဲ ျဖစ်ပါတယ် ။ ဆောင်းရာသီအတွက် ပြီးပြည့်စုံအောင်အနွေးဓာတ်ပေးမဲ့ အနွေးထည်ဖြစ်ပါတယ်။  ပါ၀င်ပစ္စည်းတွေကတော့ အရှေကဘက်တွင် ဇစ်ပါရှိပါတယ်။အရှေကဘက် ဘယ်နဲ့ညာတွင် အိတ်ကပ် ပါရှိပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
 ဘေးဘက်တွင် ဇစ်ပါရှိပါတယ် ။ ဘေးဘက်နှစ်ဘက်ဘက်တွင် အိပ်ကပ် 2ခုပါရှိပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
 ရိုးရှင်းတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်တဲ့ dress ဖြစ်ပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
 One Year Official Warranty ၁၄၂.၁ (်မင့္) x ၇၀.၁ (လ္ား) x ၇.၀ (ထူ) မီလီ ၊ ၁၃၂ ဂရမ္။ ၅.၁” Quad HD Super AMOLED (၂၅၆၀x၁၄၄၀ ၊ ၅၇၇ ppi) 64-bit Octacore Processor 3GB RAM + 64GB စၾကၱင္းသိမ္းဆၫ္းႏုိငၼႈ
 အမြင့်နှုန်း ၊ အမြန်နှုန်း ၊ ရှည်လျားသောအကွာအဝေး နှင့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ (ICR),AWB,AGC,BLC စနစ်ဖြင့် နေ ့နှင့် ည မှတ်တမ်းယူနိုင်ခြင်း။6မီလီမီတာ အတိမှန်ဘီလူးဖြင်2.8 မီလီမီတာ၊3.6 မီလီမီတာ ၊8 မီလီမီတာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ်နိုင်ခြင်း။
 ၁၃ လကၼ မ္က္ႏြာ်ပင္အက္ယ္ရြိေသာ LED-backlit widescreen display ၊ ၅မီလီမီတာ ရြိ ပါးလႊာေသာ မ္က္ႏြာ်ပင္ႏြင့္ Display Screen မြ အလင္းေရာင္်ပႏ္ဟပၼႈ အနၫ္းဆုံး်ဖစ္ေအာင္ ဒီဇိုင္း ်ပဳလုပၴားပါသၫ္။
 Embedded Processor စနစ်ဖြင့် အဓိကပံ့ပိုးပေးခြင်း။ ဗီဒီယို ၄ လိုင်းပါ၀င်ပြီး IP 4+2 up to 5Mp ကြည့်ရှနိုင်ခြင်း။
Lenovo ideapad 100 (i3)
 Intel® Core i3 5005U  4GB DDR3  CPU - Core i3,
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 8 လက်မ processor 1.6 GHz အမြန်နှုန်းက Pentium Pro RAM 2048 ကို MB ကြိုးမဲ့အမျိုးအစား 802.11a/b/ g / n
 HDCVI စနစ်ဖြင့် ဗီဒီယို input ကြိုးကို ပ့ံပိုးမှုပေးနိုင်ခြင်း။ H.264 Dual-Stream စနစ်ဖြင့် ဗွီဒီယို ချုံ ့ချဲ ့ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း HCVR4116HS-S3 သည် ရုပ်သံလိုင်းအားလုံးကို 1080N/720P ဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း။
 အမြင့်နှုန်း ၊ အမြန်နှုန်း ၊ ရှည်လျားသောအကွာအဝေး နှင့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ (ICR),AWB,AGC,BLC,2D-DNR စနစ်ဖြင့် နေ ့နှင့် ည မှတ်တမ်းယူနိုင်ခြင်း။ 8 မီလီမီတာ အတိမှန်ဘီလူးဖြင့် 3.6 မီလီမီတာ ၊6မီလီမီတာ ၊ 12 မီလီမီတာ ၊ 16 မီလီမီတာ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း။
ideapad Z 41-70 (i5)
 မျက်နှာပြင်အကျယ် 14" ပါရှိပြီး ကြည့်လင်ပြတ်သားတဲ့ Full HD Resolution ရုပ်ထွက်တွေကို ကြည့်ရှူခံစားအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
 HP ရဲ့ Entertainments Series ဖြစ်တဲ့ Pavilian G Series (G4)အမျိုးအစား
CPU ကို - ကို Quad-Core 1.8 GHz အမြန်နှုန်း & Quad-core 1.0 GHz အမြန်နှုန်းသိုလှောင်မှု / RAM ကို - 3GB / 32GB (128GB အထိ Micro-SD)ကင်မရာ - 13MP (နောက် Cam), 5MP (ရှေ့ Cam) mTouch 2.1, Fingerpint အာရုံခံ (0.2s)
 အနက်ရောင် မြို့တော် ဆိုတဲ့ အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။  အကန့် သုံးကန့် နှင့်အတူတန်းစီထားပါတယ်။  ပုခုံးကြိုးသိုင်းကြိုးပါရှိပြီး ဖြုတ်လို့ တပ်လို့ ရတဲ့ ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။  အမြင့် x အကျယ် x အနက် : 22 x 30 x 15 စင်တီမီတာ. / 8.6 x 11.8 x 5.9″
GP 62 6QF (Leopard)
 မျက်နှာပြင်အကျယ် 15.6″ ပါရှိပြီး ကြည့်လင်ပြတ်သားတဲ့ Full HD(1920×1080) ရုပ်ထွက်တွေကို ကြည့်ရှုခံစားအသုံးပြုနိုင်မယ့် Laptopတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
 HDCVI ကင်မရာဖြင့် (၄) လိုင်းအသံဖမ်းနိုင်ခြင်း။ H.264 Dual-stream ရှိပြီး 1080P မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်း။ အခမဲ့ Application အဖြစ် IDMSS Light / GDMSS ကို ရနိုင်ခြင်း။
 Networkအသုံးပြု နိုင်သော netword မှာ ပါ GSM / HSPA / LTE  internal: 32 GB ကို, 3/4 GB ကို RAM ကင်မရာ Primary 12 MP/ Secondary5MP
 မှတ်တမ်းတင်နိုင်သောလိုင်း (8) လိုင်းပါ၀င်ခြင်း။ 1080 x 1920 (resolution) ဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ပုံရိပ်များကိုရရှိနိုင်ခြင်း။ H.264 / G.711 ဖြင့် ဗီဒီယို / အသံ ကို ကောင်းမွန်စွာရရှိနိုင်ခြင်း
 မီးခိုးရောင် အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။  အတွင်းပိုင်းတွင် အခန်းနှင့်ဇစ် တပါတည်းပါရှိပါတယ်။  ပုံစံ ၂မျိုးအသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။  အမြင့်×အကျယ်×အနက် : 28 x 35 x 16 စင်တီမီတာ. / 11.0 x 13.7 x 6.2″
 bra မလိုဘဲ ၀တ်ဆင်ရတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Dress လေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Bra ကို အထဲ တွင်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့Fashion ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
 DVR ရုပ်သံလိုင်းစပ် ( 16 ) လိုင်းပါ၀င်ခြင်း။ HD-CVI 16 ကင်မရာကို ဟိုက်ဘရစ်မုဒ် တပ်ဆင်ပေးထားခြင်း။ 1080p / 720p(HD-CVI),960H (analog), 1080p(IP) ပါ၀င်ခြင်း။
 GU Brand ကနေပြီးတော့ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးဝတ် အပေါ်ဖုံး dress လက်ပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခါးတွင် အတိုးအလျော့ပြု လုပ်လို့ရ တဲ့ သံကွင်း ပါရှိပါတယ် ။ အမျိုး သမီးများအတွက် လက်ရှည် ဖြင့် တွဲဖတ်၍ ၀တ်ဆင်ရန် အတွက် အသင့်တော်ဆုံး အပေါ်ဖုံး ဖြစ်ပါတယ်။
 Bra ပါ တဲ့ dress ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။  Bra-feel ပုံစံ ဖြစ်ပြီး သင့်၏Fashion ကို ပြောင်းလဲ ပြစ်နိုငါပါတယ်။အပန်းဖြေ နေရာများကို သွားလျှင်ဝတ်ဆင်ရန်အတွက် အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ Bra မလိုတဲ့ Dress ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
 CPU - Latest Helio X25 (Deca-Core processor) Internal Storage - 32 GB (no sdcard slot) Memory -2GB RAM Camera - 21 MP (ေအနာကၠငၼရာ) /5MP (ေအရြ႕ကငၼရာ)
 HDCVI ကင်မရာဖြင့် (၃၂) လိုင်းအသံဖမ်းနိုင်ခြင်း။ H.264 Dual-streamP ရှိပြီး 1080P မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်း။ ဝေးလံသောနေရာများတွင် တက်ဘလက်(တ်) နှင့် စမက်(တ်)ဖုန်းများကို ပုံရိပ်များဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း။
 Ipad Pro Display Size - 7.9 လက်မ
 အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။ အဝတ်မှအရောင်ပြယ်ခြင်းစွန်းခြင်းဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အနံပါဝင်သော အဖြူရောင်သီးသန့်အတွက်detergent အသုံးပြုပါက အရောင်မှိန်စေပါသည်။
 ပစ္စည်း 100% polyester% အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။ အဝတ်မှအရောင်ပြယ်ခြင်းစွန်းခြင်းဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
 ခါးတွင်ခါးပတ်ကြိုး ပါရှိပါတယ်။  ရေစိုစွတ်ခြင်း သို့ မိုးရေဖြင့်ထိတွေ့ပါက ရေဖြင့်လျှော်ပေးပါ။ တခြားအရာများသို့ အရောင်ကူးပြောင်းသွားခြင်းကို သတိထားပါ။
MA - 1 blouson ၏ အကျီင်္လိက်တွင်အိတ်ပါရှိပါသည် အသေးစိတ်အချက်အလက် ဘေးဘက် လက်တွင် ဇစ်ပုံစံ အိတ် ပါရှိပါသည်။ အရှေဘက်တွင် အဖွင့် အပိတ်ဇစ်ပါရှိပါသည်။ ဘယ် ဘက်နဲ့ညာဘက်တွင် အိတ်ပါရှိပါသည်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းကို မီးပူ မထိအောင်သတိထားပေးပါ။
 MSI ၏ နောက်ဆုံးလက်ရှိမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ VR ready support လုပ်တဲ့ GE62VR 6RF Apache Pro Gaming Laptop ဟာ နောက်ဆုံးအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ 10series Graphic ဖြစ်တဲ့ GTX 1060M 6G GPU နှင့် Skylake 6th Gen CPU core i7 ကို တပ်ဆင်အသုံးပြုထားသောကြောင့် သာလွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒြပ်သားရေ, အိတ်အတွင်း၌သံလိုက်ဖြင့် ပိတ်ပစ်, ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ သံလိုက် ကြယ်သီးပါပါတယ် ။ဒေါင်လိုက်24 x ကိုအကျယ် (အောက်ခြေ) 18 စင်တီမီတာ, ပခုံးအရှည်: ~ 120 စင်တီမီတာရှိပါတယ်။
Sweatshirt ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားကောအမျိုးငမီးပါ၀တ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
 ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်  Roundလည်ပင်းတီရှပ်။  ေဘးဘက်တွင် ကြိုးဖြင့် အလျားလိုက်အပေါက်ပါရှိတယ်။
 အမြင့်နှုန်း ၊ အမြန်နှုန်း ၊ ရှည်လျားသောအကွာအဝေး နှင့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ (ICR),AWB,AGC,BLC,2D-DNR စနစ်ဖြင့် နေ့နှင့် ည မှတ်တမ်းယူနိုင်ခြင်း။ 3.6 မီလီမီတာ အတိမှန်ဘီလူး ပါ၀င်ဖြင့်6မီလီမီတာ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း။
PRINTED AND TULLE SKIRT (KIDS)
 မီးမီးလေးတွေအတွက် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ စကပ်တိုပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။  ဇာအပါးသားလေးနဲ့ ချုပ်လုပ်ထားပြီး နှစ်ထပ်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။  Instock ကုန်သွားတဲ့ပစ္စည်းများကတော့ (၂) ပတ် လောက်ထပ် စောင့်ပေးရပါမယ်။
GIRLS suspension with shorts (KIDS)
 အပေါ်ထပ်ကြိုးသိုင်းအကျင်္ ီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။  အလွယ်တကူဖြုတ်လို့တပ်လို့ ရတဲ့ ကြိုးလေးလညး်ပါရှိပါတယ်။  Instock ကုန်သွားတဲ့ပစ္စည်းများကတော့ (၂) ပတ် လောက်ထပ် စောင့်ပေးရပါမယ်။
 အမြင့်နှုန်း ၊ အမြန်နှုန်း ၊ ရှည်လျားသောအကွာအဝေး နှင့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ (ICR),AWB,AGC,BLC,2D-DNR စနစ်ဖြင့် နေ ့နှင့် ည မှတ်တမ်းယူနိုင်ခြင်း။ 3.6 မီလီမီတာ အတိမှန်ဘီလူး ပါ၀င်ခြင်း။
GIRLS denim combination Ne Dzong (KIDS)
 ကြိုးတစ်လုံးအကျင်္ ီပုံစံလေးဖြစ်ပြီး ဇာသားနဲ့ဆက်စပ်ချုပ်လုပ်ထားပါတယ်။  ဘောင်းဘီ အရှေ့/အနောက် နှစ်ဖက်လုံးမှာ အိတ်ကပ်လေးတွေပါရှိပါတယ်။  Instock ကုန်သွားတဲ့ပစ္စည်းများကတော့ (၂) ပတ် လောက်ထပ် စောင့်ပေးရပါမယ်။
 စကပ် အရှည်ဖြစ်ပြီး ခါးsize ကိုလဲ ကြိုး ဖြင့် အတိုးအလျော့ ကို လုပ်လို့ရပါတယ် ။ အနောက်ဘက်တွင် ဘယ်၊ညာ အိတ်နှစ်ဖက် ပါရှိသည်။
SanDisk Micro SD Class 4(with adapter)
 အရွယ်အစား 11မီလီမီတာ x 15မီလီမီတာ x 1မီလီမီတာ Micro SD card  2.7V ~ 3.6V
Samsung Galaxy J5 (2016 Edition)
 Display : ၅.၂ လက်မ Processor : Octa-Core 1.6GHz ကင်မရာ : 13MP (အနောက်), 5Mp (အရှေ ့)
All Product 1 to 100
 သုံးရာသီစလုံးဝတ်ဆင်နိုင်ပြီးတော့အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ တံဆိပ်ဖြစ်တယ် ။ အရှေ့ ဘက်တွင် အိပ် နှစ်ဘက်ပါရှိပါတယ်။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ZK Silkbio-100TC Model မှာ အခြား ZK Attendance Machine များကဲ့သို့ Face/Fingerprint/Card/ Password သုံးမျိုးအသုံးပြုနိုင်သော4in 1 စက်ဖြစ်ပါတယ်…
 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: (လက်ဝဲနှင့်လက်ယာခလုတ်နှင့်အတူ) ×2ရှေ့တေ်၌ (လက်ဝဲ-ဇစ်နှင့်အတူ) စီတန်း, × 1 အင်္ကျီလက် ပစ္စည်း 100% ဝါဂွမ်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
3-inch TFT Screen Fingerprint time and...
Data များကို network ကြိုးနှင့်သော်လည်းကောင်း USB Stick နှင့်သော်လည်းကောင်း လွယ်ကူစွာသယ်ယူနိုင်ပြီး စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် လက်လီလက်ကားရရှိနိုင်ပါတယ်။ Wifi System ပါရှိသောကြောင့် Network ကြိုးများကို သုံး၍သော်လည်းကောင်း USB Stick နှင့်သော်လည်းကောင်း Data များသယ်ယူစရာမလိုပဲ Internet Access ဖြစ်ရုံနဲ့ အလွယ်တကူ Download လုပ်ယူနိုင်တဲ့အတွက်...
 Display : ၅.၅ လက်မ
 Storage - 16 GB , 64 GB , 128 GB
 Max [email protected] စနစ်ပါရှိခြင်း။(IP67) (HD) စနစ်ဖြင့်ကြည်လင်သော ရုပ်သံကိုရရှိနိုင်ပြီး (SD)ကဒ်ထည့်ထားပြီးပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။ 1280x720 (resolution) ဖြင့်ကြည်လင်သောရုပ်သံကိုရရှိနိုင်ခြင်း။
FingerPrint Door Lock (HL100)
 အဆင့်မြင့် biometric နည်းပညာအမာခံ သံမဏီ ဆောက်လုပ်ရေး
 GSM sim card (ooredoo, telenor, mpt ) နှစ်သက်ရာဖြင့်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး Dual-Sim ဖြစ်တဲ့ အတွက် အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သီးခြားခွဲထားလိုသူများအတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ။  ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ မျက်နှာပြင်ရှိပြီး screen size 5.5 လက်မ ရှိပါတယ်။
သိုလှောင်မှု: ( 16 GB, 128GB)
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Daily Attendance ကို စက်များသုံး၍ စနစ်တကျကောက်ယူမယ်ဆိုလျှင်…ကဒ်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဝန်ထမ်းများရဲ့ Daily Attendance ကိုကောက်ယူနိုင်သော စက်ဖြစ်ပါတယ်. ကဒ်အနေနဲ့ အထူအပါးနှစ်မျိုးရနိုင်ပြီး ကဒ်မျက်နှာစာပေါ်မှာ Company Logo/image များကို Printed လုပ်နိုင်ပါတယ်။
 ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Daily Attendance ကို စက်တွေ သုံးပြီး ကောက်ယူလာကြပါတယ်။ အရင်လို ရုံးဆင်းရုံးတက် လက်မှတ်ထိုးနေစရာမလိုတော့ပဲ လက်ဗွေနှိပ်စနစ် ကဒ်စနစ်များကို အစားထိုးအသုံးပြုလာကြပြီး အသုံးပြုရလည်း လွန်စွာမှ လွယ်ကူပါတယ်။
Apple Natural Clean Peeling Gel
 မျက်နှာပေါ်ရှိ ဆဲလ်သေများကို ထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေးပြီး ဆဲလ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်စေပြီး တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက်ထွက်ခြင်းဝက်ခြံထွက်ခြင်း၊ အရေးကြောင်း ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးပြီး နူးညံ့ဝင်းပသော အသားအရေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း ။
display: ၅.၇ လက်မProcessor : Quad-Core 1.8 + 1.3GHz
 ပစၥၫ္း 100% ဝါျဂမ္း်ဖင့္ထုတႅဳပၴား်ခင္း်ဖစၸါတယ္။ အဝတ္ေလ္ာၥက္ အၾတင္းမြ အမြဳိကၡံပိုက္အိပ္ ကိုအသံုး်ပဳရာၾတင္ သႏ့္ရြင္းေေနစရႏ္သတိ်ပဳပါ။ အဝတၼြေအရာင္်ပယ္်ခင္းျစႏ္း်ခင္း်ဖစ္ေစ်ခင္းေႀကာင့္ ေရြာင္ႀကဥၸါ။
Mirascreen wireless display HDMi device
 Wifi stick လေးဟာ HDMI ပါဝင် တဲ့ TV, Monitor Display မှာတပ်ဆင်အသုံးပြုရမှာပါ။
 HDCVI ဖြင့် ဗီဒီယို input ကြိုးကို ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်ခြင်း။ H.264 +/ H.264 Dual-stream ဖြင့်ဗီဒီယိုကိုချုံ ့၊ချဲ ့ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။ ရုပ်သံလိုင်းအားလုံးကို1080N/720 ဖြင့် အသံဖမ်းနိုင်ခြင်း။
 အသစ်ထွက်ရှိလာသော fingerprint ဖြစ်ပါတယ်။ အတင်းအဓမ္မ entry ကိုမှကာကွယ်တားဆီးဖို့•မလှုပ်မရှားလက်ကိုင်ဒီဇိုင်း
 ပစ္စည်း - သွပ်အလွိုင်း လက်ဗွေစွမ်းဆောင်ရည် - 500 ဆက်သွယ်ရေး - USB flash နှင့် disk တံခါးကိုအရွယ်အစား - 94 (W) × 312.8 (L) မီလီမီတာ & အထက် Options ကို - ID ကဒ်, Mifare card
Rugged,ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်းလွယ်ကူသောအစားထိုးခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် .American နှင့် Standard တစ်ခုတည်း မှာ .Independent clutch မော်တာဒီဇိုင်း
$207.10 $218.00 -5%
 Network >>> GSM / HSPA / LTE  SIM >>> Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
 ကဒ်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဝန်ထမ်းများရဲ့ Daily Attendance ကိုကောက်ယူနိုင်သော စက်ဖြစ်ပါတယ်။  ကဒ်အနေနဲ့ အထူအပါးနှစ်မျိုးရနိုင်ပြီး ကဒ်မျက်နှာစာပေါ်မှာ Company Logo/image များကို Printed လုပ်နိုင်ပါတယ်။
 1 coin = 1 $ နှင့်ညီမျှသည်။ Virtual coin သည် ကျွန်ှပ်တို့ problemclean.com တွင် ပြင်ပငွေကြေးအတိုင်းတန်ဖိုးညီမျှစွာ အသုံးပြုနိုင်သော အွန်လိုင်း ငွေကြေး အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေး - USB Flash disk,တံခါးကိုအရွယ်အစား - 96 (W) 328 (L) မီလီမီတာ & အထက်×, တံခါးကိုအထူ - 55-70mm (စံ) / 40-55mm (optional ကို) / 70-90mm (optional ),
 ပစၥည္းလဲမွို႔ 88%, 10% polyester 2% polyurethane အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။ အဝတ်မှအရောင်ပြယ်ခြင်းစွန်းခြင်းဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
display: 5.5 လက်မProcessor ကို Quad-Core 1.2GHzသိုလှောင်မှု: ပြည်တွင်း 8GB, 1.5GB RAM,
Grape Natural Clean Peeling Gel
Who : မျက်နှာပေါ်ရှိ ဆဲလ်သေများကို ထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေးပြီး ဆဲလ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်စေပြီး တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက်ထွက်ခြင်း၀က်ခြံထွက်ခြင်း၊ အရေးကြောင်း ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးပြီး နူးညံ့ဝင်းပသော အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
EKEL SNAIL MOISTURE SOOTHING GEL
 EKEL ကထုတ်တဲ့ မျက်နှာလိမ်းGel လေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်  မျက်နှာပေါ်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ နေလောင်ထားသော နေရာများနှင့် ပျက်စီးနေသော အသားအရေများအတွက် အသုံးဝင်သော Gel ဖြစ်သည်။
 အမာခံ သံမဏီ ဆောက်လုပ်ရေး illuminated keypad entry လက်ဗွေ , PIN နံပါတ် ဖြင့် key အားဖွင့်နိုင်ခြင်း လူဦးရေ အယောက်100 ၏ လက်ဗွေ (သို ့) PIN ဖြင့် အသုံးပြု နိုင်ခြင်း
 Capacity - 16 GB , 64 GB ထိ
Samsung original charger & cable
 မိုက္ခရို USB ေဒတာေကဘယ္လ္ျကိုး Charger ကိုစမတ္ဖုန္း နွင့္ Tablet မ်ားကဲ့သို ့ျမင့္မားေသာ ေတာင္းဆိုမႈ ေတြပါ၀င္သည္။
 HDCVI ကင်မရာဖြင့် (16)လိုင်းအသံဖမ်းနိုင်ခြင်း။ Display 1080P/720P ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်း။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း HDMI/VGA စနစ်ဖြင့် ဗီဒီယိုထွက်ရှိနိုင်ခြင်း။
 HDCVI စနစ်ဖြင့် ဗီဒီယို input ကြိုးကို ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်ခြင်း။ ရုပ်သံလိုင်းအားလုံးကို 1080P/720P ဖြင့်မှတ်တမ်းယူနိုင်ခြင်း။ 4/8/ch ဖြင့် ပြန်ဖွင့်ချိန်တွင် အမှန်ကိုဖော်ပြပေးခြင်း။
LOVE CINEMA Soft & Clear Eyeliner
Eyeliner လို့ပြောလိုက်ရင ်မိန်းကလေး တော်တော်များများရဲ့ မျက်လုံးလှလှလေး တွေ အတွက် မရှိမဖြစ် ပစ္စည်းလေး တစ်ခု လို မြင်မိမှာပါ။
 အဆင့်မြင့် biometric နည်းပညာ  အမာခံ သံမဏီ ဆောက်လုပ်ရေး  illuminated keypad entry
Crash Denim Shorts
 ခါးပတ် ကြိုးကွင်းနဲ့အတူ, အိပ်နှင်္စခုပ်ဝင်ပါတယ် (ညာနဲ့ဘယ်ဖက်အကြွေစေ့အိတ်ကပ်ထည့်သွင်း) ထားပါတယ်။ (ဆိုဖာ, ဖိနပ်, အိတ်, ကားထိုင်ခုံစသည်တို့ကို) နဲ့ပေါင်းစပ်ကို၍ လျှာ်ခြင်းကို ရှာင်ကြဉ်ပါ။ အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်နဲ့အမီ ရင်ဘောင်တန်းလိုသော အဆင့်မြင့် ရုံးခန်းများအတွက် မျက်နှာဖြင့် Scan ဖတ်၍ Attendance ကောက်ယူနိုင်သော Iface 302 Model တစ်မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်… ZK Iface 302 Model မှာ အခြား ZK Attendance Machine များကဲ့သို့ Face/Fingerprint/Card/ Password သုံးမျိုးအသုံးပြုနိုင်သော4in 1 စက်ဖြစ်ပါတယ်…
 Display :6လက်မ LED Display  Processor : Quad-core 1.5 GHz
 ပစ္စည်း : 100% ဝါဂွမ်း, 88% ဝါဂွမ်း, 12% rayon ထိုပုံနှိပ်အစိတ်အပိုင်းမှ Ironing ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
 ကားအတွင်းအမှိုက်သေးသေးလေးတွေကအစ သဲများပါမကျန်အောင်စုပ် ပေးမယ့် 120W ' High power ကားဖုန်စုပ်စက်လေးပါ။
 HDTVI/AHD/CVI စနစ်များကို အဓိက ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်ပြီး မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်း။ အမြင့်နှုန်း ၊ အမြန်နှုန်း ၊ ရှည်လျားသောအကွာအဝေး နှင့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ (ICR),AWB,AGC,BLC,2D-DNR စနစ်ဖြင့် နေ ့နှင့် ည မှတ်တမ်းယူနိုင်ခြင်း။
 အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ FingerPrint Door Lock ( TL100 ) ခိုင်ခန့်ပြီး ဘေးကင်း လုံခြုံမှုရှိရန်အတွက် သူခိုးရန်မှကာကွယ်ရန် ။
Dell WM123 Wireless Optical Mouse
 ကြိုးမဲ့ 3-button ကို optical mouseဖြစ်သည်။ plug ထိုးလိုက်ရုံဖြင့် အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းကြောင့် အလုပ်လုပ်ရာ၌ရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေခြင်း။
 Xiaomi က အရွယ်ကြီးမားပြီး တန်ဖိုးသက်သာတဲ့ tablet အသစ်တစ်လုံးကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။  Xiaomi Mi Max လို့ အမည်ပေးထားပြီး သတ္တု ကိုယ်ထည် တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
5V Power Supply (ZK-B2)
mAh - 1900 mAh ဘက်ထရီCharging အချိန် - 6hDischarging အချိန် - 4h
 1 Megapixel 720p Water-Proof HDCVI စနစ်ဖြင့် IR-Bullet ကင်မရာစသည့် အင်္ဂါရပ်များပါ၀င်ခြင်း။ 1/4"1Megapixel CMOS 25 / 30 fps @ 720p,IP 67
EKEL UV SUN BLOCK Cream
 ရှားစောင်းလက်ပပ်နှင့် ဗီတာမင်အီးတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော နေလောင်ခရင်မ်ဖြစ်သည်။
LUNARIS Two Way MakeUp
တစ်နေကုန်ဖြူဝင်းပြီး ပုလဲလေး လို တောက်ပနေစေဖို့အတွက်။LUNARIS ကထုတ်တဲ့ Two Way MakeUpလေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ပန်းဝတ်ဆံများဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသားအရည်အတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မဖြစ်နိုင်ပါ။
Apricot Natural Clean Peeling Gel
 ဒီdress လေးဟာဆွဲသားဖြစ်ပြီးတော့ ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ dress ဖြစ်ပါတယ် ။ MaterialAcrylic 80% ·နိုင်လွန် 20% ဒီထုတ်ကုန်သည် အရောင် ရင့် ဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ခြားအထည်များနှင့်ရော၍ရော်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
SanDisk Micro SD Class432GB
 Storage - 32GB ။ ဒေတာများကို လွှဲ ပြောင်းချင်း - 4MB/SEC ။ microSDHC ။
 ကုန်ပစ္စည်း : 97% polyester polyurethane 3%, အနံရိုးအဘို့ကို: 95% polyester, 5% Polyurethane အိတ်ကပ် ×2ရှေ့ဘက်တွင် ပါရှိပါသည်။ အဝတ်ကို ပွတ်တိုက်၍ ကြမ်းတမ်းစွာ လျှော်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ ။
display: ၅.၅ လက်မ Processor : Dual-core 1.82 + 1.44GHz
INO3ရဲ့အားသာချက်ကတော့ ဘက်ထရီ Back up ပါပြီး နာရီပေါင်း ၆နာရီမှ ၈နာရီထိ ဘက်ထရီခံတဲ့ အတွက်ကြောင့် မီးပျက်တတ်သော နေရာများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်နိုင်သော စက်ဖြစ်ပါတယ်။
 အနည်းငယ်လိမ်းပေးရုံဖြင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အရေးကြောင်း ဖြစ်ခြင်းကိုလျော့ပါးသွားစေပြီး အသားအရေကို ဖြူလာအောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော BB Creamအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
လ မျက်နှာပြင်အကျယ် 14" ပါရှိပြီး ကြည့်လင်ပြတ်သားတဲ့ Full HD Resolution ရုပ်ထွက်တွေကိုကြည့်ရှူခံစားအသုံးပြုနိုင်မယ့်Laptop တလုံးဖြစ်ခြင်း။
[Koelf] Pearl Shea Butter Hydro Gel Eye Patch
 ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်တဲ့သူအတွက်အဓိကထားသုံးသင့်တဲ့ မျက်ကွင်း ကပ်တဲ့ jelly ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာကိုသစ်ပြီး ညအိပ်ခံ နီး အချိန်တွင် ကပ် ထားရ ပါမယ်။
INO4 ရဲ့အားသာချက်ကတော့ ဘက်ထရီ Back up ပါပြီး နာရီပေါင်း ၆နာရီမှ ၈နာရီထိ ဘက်ထရီခံတဲ့ အတွက်ကြောင့် မီးပျက်တတ်သော နေရာများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်နိုင်သော စက်ဖြစ်ပါတယ်။
 hood sweat dress ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ ဘက်တွင် အိပ်ကပ် ၂ ဘက်ပါရှိပါတယ် ။ 80% ဝါဂွမ်း, 20% polyester, နံရိုးအဘို့ကို: 95% ဝါဂွမ်း, 5% polyurethane  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Touch Light ( two battery)
$14.30 $22.00 -35%
selfe defense electronic stang gun
$5.63 $7.50 -25%
*ဆားဝက္ၿခံကိုလက္နဲ႔ညႇစ္တာက မေကာင္းပါဘူး.။ *ဂ်ပန္နည္းပညာနဲ႔ ဝက္ၿခံညႇစ္စက္ေလးပါ။
Mini Rainbow Speaker
$12.15 $16.20 -25%
TACLIGHT ( ၁မိုင်ပြေး အကြမ်းခံဓါတ်မီး )
$11.14 $18.56 -40%
D-Power Bluetooth Woofer Speaker
$18.63 $27.00 -31%
 Computer ; Laptop ; Portable EVD & DVD တို့နှင့်တွဲဘက်အသုံးပြုနိုင်သည်။  SD ကဒ်ရော Stick ကော နှစ်မျိုးလုံးဆိုဒ်ပြီးတွဲသုံးလို့ရသလို့။
RC Drift ပြိုင်ကား
$25.80 $43.00 -40%
Remote ဖြင့်ထိမ်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်သေား လူကြီးဆော့ Drift ပြိုင်ကားအမျိူးအစား ပဲဖြစ်ပါတယ်.။ 4x4 drive ဖြစ်ပါတယ်။ ကားအောက်ဘက် ပြိုင်ကားမီးတန်ပြာပါ၀င်၍ ညဘက်မောင်သေားအခါ လှပ ပါတယ်.။
Waterproof Sport DV Camera
$42.09 $52.61 -20%
Ice Mini Cooler
$8.31 $8.75 -5%
 နွေရာသီ ပူအိုက်တဲ့အခါ မိမိနံဘေးနားမှာ mini air cooler လေးရှိတော့ သက်သာတာပေါ့။  သေးငယ်ပေမယ် ...လူတကိုစာ ကို direction2ခုနဲ့ လေအေးများကို မှုတ်ထုတ်ပေးနိုုင်ပြီ power bank ဖြင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ portable power bank လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
R/C Super A HD Drone
$52.25 $55.00 -5%
Drone W7 Venture6Canais, 2.4 Ghz
Drone W7 Venture 2.4 Ghz ပါရှိပြီး Channel6လိုင်းပါ၀င်ပါတယ်။ HD Camera ပါ၀င်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသော Photo..Video များရရှိနိုင်ပါတယ်။
W8 SKY EYE Camera drone (Operation Range -...
နိုင်ငံတကာတွင်လူကြိုက်များတဲ့ SKY EYE မှထုတ်လုပ်တဲ့ Drone လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ W8 MODEL Wifi FPV Version အကြမ်းခံ Drone အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
Wireless charger for ios ( iphone )
 အဝိုငး် ပြားလေးပေါ်တင်ထားရုံဖြင့် ကြိုးထိုးရန်မလိုပဲ wireless charging အဖြစ်ပျောင်းလဲပေးနိူင်သေား ပစ္စည်းပါ၊
Mini DV Water Proof Camera (SQ13)
$43.46 $45.75 -5%
Wireless charger for android mobile
 Can use all android mobile. မည်သည် touch android ဖုန်းကိုမဆို အဝိုငး် ပြားလေးပေါ်တင်ထားရုံဖြင့် ကြိုးထိုးရန်မလိုပဲ wireless charging အဖြစ်ပျောင်းလဲပေးနိူင်သေား ပစ္စည်းပါ၊
$32.39 $41.00 -21%
*ကှညလြငပြှတသြားသော Full HD Resolution 1080 P ပါရှိပါတယြ။ *ထောငြ့တိုငြးမှာ 120 Degree မှငြ့မားတဲ့ ကယွပြှနြ့သော မှနဘြီလူးပါရှိပါတယြ။ *H.264 ဖှငြ့ ဓာတပြုံမွားကို အခွုံ ့အခွဲ ့လုပနြိုငသြော အဆငြ့မှငြ့ နညြးပညာပါရှိပါတယြ။
LED Projector with Speaker & Remote Control
အမြဲတမ်း တီဗွီ ဖုန်းတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာ ငြီးငွေ့လာရောပေါ့။ ဒီလိုအရာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် မြင်ကွင်း ကျယ်ကျယ် လေးနဲ့ ကိုယ့်အိမ်မှာ အပန်းဖြေ အားရပါးရ ကြည့်လို့ရအောင် projector လေးတော့ဆောင်ထားသင့်တာပေါ့နော်။
*ကော်သားနဲ့မဟုတ် ဘဲ သံထည် နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကလေးကစားစရာ အရုပ်ဆက်ပစ္စည်းလေးပါ။ *3D Model သတ္တု အမျိုးအစားဖြစ့်ပီး ကာလာအရောင်စုံပါ၀င်တဲ့ အတွက် ကလေးများ အမြင်အာရုံဆန်းသစ် မှုကိုရရှိစေမှာပါ။
New Moel Water Dance Speaker
$17.44 $18.36 -5%
 အရောင် : အဖြူ ရောင် ၊ အမဲ ရောင် ။ တွဲဖက် အသုံးပြု နိုင်သော Devicesများ Built-in amp, Bluetooth(R) 2.1+ EDR compatible, Hi-fi audio Connects to i Devices, smartphone, Android, tablet, notebook, MP3 player & more
$22.08 $29.84 -26%
 ကမ္ဘာအငြိမ်ဆုံး ထိမ်းသိမ်းရအလွယ်ဆုံးကူဆုံး ဆု့ ရရှိထားတဲ့ Drone လေးဖြစ်ပါတယ်။  Drone ကြီးများတွင်ပါဝင်လေရှိသော 360 Degree 3D Stunt ပါဝင်ပါသည်။
(Simple Discount)Wireless charger for...
$11.31 $13.00 -13%
(Simple Discount)Mobile VR Box
$15.80 $20.00 -21%
$6.21 $9.00 -31%
$14.66 $18.33 -20%
Huawei Office Wifi Router ( 4G )
$51.35 $65.00 -21%
 သင့်အင်တာနက် 4G speed လိုနေပြီလား ? internet video များကို မြန်ဆန်စွာ down ခြင်သလား
$17.50 $20.59 -15%
2.Intellient Metal Diy Model
$11.02 $16.95 -35%
3mAh Roller Super Charger
$12.63 $18.30 -31%
Wirless Fast Speed Formula Racer (building...
$27.89 $35.30 -21%
Kids GPS Smart Watch (new model)
$27.89 $49.81 -44%
portable automatic cloths dryer
$22.18 $27.73 -20%
14 in 1 kit solar robot
$44.02 $50.02 -12%
$45.24 $58.00 -22%
- Selfie Drone တွေခေတ်စားလာဒါနဲ့အညီ အိပ်ထဲလွယ်လင့်တကူ သယ်ဆောင်လို့ရမဲ့ Pocket Drone လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။ ဆိုက်အနေနဲ့ လက်ဖဝါးတစ်ခုစာရှိပြီး ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူတဲ့ Pocket Drone လေး ပါ။
Micro HD Magnetic Wifi Camera
$66.11 $82.64 -20%
DJI MAVIC PRO PLATINUM EDITION COMBO
$1,324.55 $1,394.27 -5%
LTE 4G Sim Router (B593)
$59.08 $62.19 -5%
3G Mobile Wifi (M5350)
$53.72 $56.55 -5%
$47.98 $63.97 -25%
GPS HD Wifi Done battery
$20.72 $28.00 -26%
Karaoake Microphone with Bluetooth Speaker
$26.65 $41.00 -35%
Shop By Sellers/Locations
5.1 FM Bluetooth Home Theater(JP-705)
$113.92 $144.20 -21%
Kenwood Sandwish Maker(SM650)
$45.76 $55.80 -18%
GT06 GPS Tracker(ccurate)
$35.92 $49.20 -27%
5.1 FM Bluetooth Home Theater (Big Size)
$118.50 $158.00 -25%
- တကယ် ရုပ်ရှင်ရုံကြီးထဲမှာ ကြည့်ရသလို ဇတ်ကားထဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရောက်သွားနိုင်တဲ့ ခံစားချက်ပေးနိုင်တဲ့ 5.1 speaker လေး ဖြစ်တဲ့ FM Bluetooth Home Theater လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
SQ6 HD Camera
$25.48 $28.00 -9%
- လိုတဲ့နေရာသုံး သေးငယ်ပေါ့ပါးတဲ့ ကင်မရာလေးတစ်လုံးရှာနေပါသလား 12MP ရုပ်ထွက်နဲ့ 90 degree အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ SQ6 HD Camera လေးနဲ့ မိက်ဆက်ပေးပါရစေ ။
IOS android to HDTV cable
$16.56 $23.00 -28%
$27.36 $33.78 -19%
ကြည်လင်ပျက်သားတဲ့ ရုပ်ထွက်နဲ့ နေရာမရွေး သယ်ဆောင်ရိုက်ကူးခြင်ပါသလား Ultra HD Action Camera က သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ။
$13.12 $16.40 -20%
Cloud Storage Intelligent Camera(YCC365Plus)
$38.73 $57.80 -33%
There are no ending auctions at this time.
There are no popular auctions with at least 1 bid at this time.
Selling on ur marketplace is an ecommerce service for sellers around the world - to list your products on our marketplace fo rsale. By selling on the our marketplace, you have the opportunity to reach millions of customers, while providing them with the familiar, trustworthy shopping experience that we are known for.
Top Suppliers and Agents
QW09 Smart Watch (Android OS)
$43.38 $49.30 -12%
GSM Magnetic Tracker
2017 Mini LED Projector (Normal)
$108.56 $127.72 -15%
DJI Spark Original Battery
Day & Night - Clear Visor
အခု ဖော်ပြထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးကတော့ ၄င်း ပြသနာ၂ခုလုံးကို တပြိုင်တည်းဖြေရှင်းပေးပြီး မျက်မှန် ကြီးတပ်မောင်းရလို့ စိတ်အိုက်သူတွေ အတွက်ရော Day ရော Night ရော အဆင်ပြေစေဖို့ ကားမောင်းသူများအတွက် နောက်ဆုံး ထွက်ရှိလာသော အထောက်ကူပြု ပစ္စည်းလေးတခု ဖြစ်ပါတယ် ။
Universal Clips Lens
$3.35 $5.32 -37%
RC Nitro Racing Car
$231.37 $296.63 -22%
- တကယ် အင်ဂျင်အစစ်နဲ့ Nitro ဆီထည့်ပြီး မောင်းလို့ရတဲ့ Racing ကားကိုရှာနေပါသလား ? လက်ရှီ ကားလေးက မှိုင်နန်း ၆၀ အထိမောင်းနင်နိုင်သလို ရေ ပေါ် လျှပ်ပြေးပါ သုံးလို့ရပါတယ် ။
Wirless LED Micro Projector(P 1 Plus)
$98.28 $117.00 -16%
ဘယ်သွားသွား အိပ်ထဲထည့်ပြီး ဆောင်ထားလို့ ရတဲ့အရွယ် Powerbank နဲ့ တွဲသုံးလို့ရမဲ့ ခရီဆောင် Potable Projector လေးပြပါဆိုရင် အသေးဆုံး Wirless LED micro Projector လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
 Samsung အမှတ်တံဆိပ် Gear S2 လက်ပတ်နာရီ၌ သေသပ်လှပပြီး စတိုင်ကျသော ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းရှိသည့်အပြင် သွက်လက်မြန်ဆန်သော နည်းပညာများကိုလည်း တွေ့မြင်ခံစားနိုင်မှာဖြစ်သည်။
Korean Eggplus Egg Roll Maker
ကြက်ဥကို အချောင်းလိုက်လေးအတိုင်းကြော်ပေးနိုင်သည့်ကြက်ဥ ကြော်စက်လေးပါ..
$28.98 $32.20 -10%
4 Channel Wirless HD NVR CCTV New model
$202.02 $259.00 -22%
မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ယနေ့ ခေတ်မှာ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာကတာ့ လုံခြုံရေးအတွက် တပ်ဆင်ထားဖို့ CCTV Camera လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုခုကြောင့် ကိုမေ့နေတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို အလွယ်တကူပြန်ရှာဖို့ ဒါမှမဟုတ် အရေးပေါ် တခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အသေးစိတ်ပြန်လည်ကြည့်နိုင်ဖို့နဲ လုံခြုံရေးအတွက် အပြင်ရောက်ရင်တောင် မှလှမ်းကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ။
$18.32 $22.90 -20%
တည်နေရာကို အလွယ်တကူသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ GPS Tracker with Secuirty Alarm လေးက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အရေးပေါ် ထောက်လှမ်းဖို့ လိုအပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ GPS Tracker လေးက လွယ်လင့်တကူ ဖွက်ထည့်ပေးလို့ရအောင်အရမ်းသေးငယ်ပြီး တိကျတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ တဖက်က အသံတွေ ကိုလဲ တခြားသူမသိအောင် အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် တကယ်အသုံးဝင်တယ်ဆိုဒါမမှားပါဘူးခင်ဗျာ
Universal Tripot with Remote Control
$14.22 $18.00 -21%
ခရီးထွက်တဲ့အချိန် Phone ကို ထောက်ဖို့ Stand လိုနေပါသလား ? Projector ကြည့်ဖိုအတွက် Stand လိုနေပါသလား ? ဒီ Universel Tripod with Remote control လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
Motorized Flexible Building & Play
Wirless Access Point (TL-WA7210N
$62.08 $77.60 -20%
- အရမ်းပါးလွာပြီး အသုံးပြုဖို့လဲ အဆင်ပြေတဲ့ သေငယ်တဲ့ H96 Pro Plus 4K Android TV box လေး နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
Remote Control Basketball Camera
$34.85 $75.75 -54%
နေပူ ထဲဖြစ်ဖြစ် သွားလာရင်လာရင်း မှတ်တမ်းမှတ်ဖို့ လိုအပ်နေပါသလား Remote control တစ်ချက်နိပ်ရုံဖြင့် သင့်ခေါင်းလှည်တဲ့ ဘက် ကို Video / Photo လွယ်လင့်တကူ ရိုက်ပေးနိုင်တဲ့ Remote Control Basket ball cap Camera လေးရှိပါတယ် ။
SQ 13 HD Camera
$38.18 $50.90 -25%
5modes Ultra Bright Flash Light
2 in 1 Polar Star X GPS
 (1) GPS Navigation ရန်ကုန်၊ မန်းတလေး၊ နေပြည်တော်၊ တောင်ကြီး၊ ပြည်၊ မကွေး၊ ပဲခူး၊ မော်လမြိုင်ကားဝင်၍ရသောလမ်းမှန်သမျှ၏ 90% ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။
Hidden Hotspot HD CCTV Charger(256GB support)
❖ရေမတင်အသားဖြစ်ပြီး ရေငွေ ့မရိုက်သည့်အတွက် မိုးရာသီအတွက်လည်း အသုံးဝင်သော ဂျာကင်ဖြစ်ပါသည်....အတွင်းသားကိုနူးညံံ့စေရန် ချည်ဂွမး်နှင့်တွဲချုပ်ထားသည့်အတွက် အေးသောရာသီတွင်နွေးထွေးနူးညံံ့မှုကို ခံစားရစေပါသည်.....ချိုငး်နှစ်ဖက်တွင် ဇစ်ပါသည့်အတွက် လက်မြှောက်သည့်အခါတွင်လည်း အဆင်ပြေစေပါသည်...